Coin.2 စျေး - အွန်လိုင်း C2 ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Coin.2 (C2)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Coin.2 (C2) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Coin.2 ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
C2 – Coin.2
Market ကဦးထုပ်: $34 775.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Coin.2 တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Coin.2 များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Coin.2C2 သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00248Coin.2C2 သို့ ယူရိုEUR€0.0021Coin.2C2 သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0019Coin.2C2 သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00226Coin.2C2 သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0225Coin.2C2 သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0157Coin.2C2 သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0549Coin.2C2 သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00924Coin.2C2 သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0033Coin.2C2 သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00345Coin.2C2 သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.056Coin.2C2 သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0193Coin.2C2 သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0131Coin.2C2 သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.186Coin.2C2 သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.416Coin.2C2 သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0034Coin.2C2 သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00373Coin.2C2 သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.077Coin.2C2 သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0173Coin.2C2 သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.262Coin.2C2 သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2.95Coin.2C2 သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.957Coin.2C2 သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.182Coin.2C2 သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0688
Coin.2C2 သို့ BitcoinBTC0.0000002 Coin.2C2 သို့ EthereumETH0.000006 Coin.2C2 သို့ LitecoinLTC0.00004 Coin.2C2 သို့ DigitalCashDASH0.00003 Coin.2C2 သို့ MoneroXMR0.00003 Coin.2C2 သို့ NxtNXT0.206 Coin.2C2 သို့ Ethereum ClassicETC0.000347 Coin.2C2 သို့ DogecoinDOGE0.687 Coin.2C2 သို့ ZCashZEC0.00003 Coin.2C2 သို့ BitsharesBTS0.0969 Coin.2C2 သို့ DigiByteDGB0.0948 Coin.2C2 သို့ RippleXRP0.0083 Coin.2C2 သို့ BitcoinDarkBTCD0.00009 Coin.2C2 သို့ PeerCoinPPC0.00869 Coin.2C2 သို့ CraigsCoinCRAIG1.16 Coin.2C2 သို့ BitstakeXBS0.108 Coin.2C2 သို့ PayCoinXPY0.0444 Coin.2C2 သို့ ProsperCoinPRC0.319 Coin.2C2 သို့ YbCoinYBC0.000001 Coin.2C2 သို့ DarkKushDANK0.815 Coin.2C2 သို့ GiveCoinGIVE5.5 Coin.2C2 သို့ KoboCoinKOBO0.562 Coin.2C2 သို့ DarkTokenDT0.00229 Coin.2C2 သို့ CETUS CoinCETI7.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 08:30:01 +0000.